သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: သာမန်လူ
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 3:10 AM
ကျနော် သာ ကိုကို ဆိုရင်တော့ ကျနော် ကောင်မလေး ဆီ ပို့ တဲ့ Message ပိုင်ရှင်တွေ ကို တည့်မေးမိမှာ သေချာတယ်။
တော်ရုံတော့ သူမလဲ PIN NO တစ်ခုကို ပေးမှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး......
ကျနော် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ခနပဲကြား ဖူးတာ... ဒါပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကောင်းလွန်းတော့ စာကြာင်းလေး တစ်ကြောင်း ဟာ ဒီနေ့ ထိနားထဲက မထွက်ဘူး..
"အပစ်အနာအဆာတွေ တွေ့ ရင် အချစ်နဲ့ ပြင်ဆင်မယ် ကွယ်"
သီချင်းလေးနဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ တွဲတင်ထားတော့ စာဖတ်နေရင်းနဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို နားထောင်နေရသလိုပဲ မလေးရေ…
Plot လေးက သပ်ရပ်လှပပါတယ်ဗျာ.
ကျွန်တော်သာ ဇာတ်လိုက်နေရာမှာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းလေးတွေကို ထပ်ဆုံမိအောင်ကြိုးစားမယ်.
ပြီးတော့ အားယူပြီး ပြုံးပြလိုက်မယ်.
သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ သာမန်နဲ့မတူတဲ့ အချစ်ကို အဲဒီ့အခိုက်အတန့်မှာ သူမ သိသွားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်လေ…
တကယ်လို့များ သူမ နေရာမှာ ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လည်း
သာမန်လူရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းလေးရဲ့ သာမန်ဆန်မှူက အချစ်မဟုတ်တာ သေချာတယ်။
မလေးရေ နစ်မျောသွားတာပါပဲ :)